Maitiro Ekuyera Yako Yepamhepo Ruzhinji Hukama Kubudirira
China, Gumiguru 6, 2016 China, Gumiguru 6, 2016 Douglas Karr
Maitiro akakosha kuyera kushanda kwechinhu chero chipi zvacho chekushambadzira pamhepo, kusanganisira hukama hweveruzhinji. Pazasi pane maviri maseti emiyero muindastiri, AMEC nePRSA). Ini pachangu, ndinotenda kuti nyanzvi dzePR dzinofanirwa kunge dzichitora mametric ekutsvagisawo organic, kusanganisa kuvapo kwehukama nevehukama muchikamu chimwe chete chezwi zvine chekuita nevakwikwidzi vavo. Iyo Barcelona Kuzivisa kweRuzhinji Hukama Kuyera Kuyera Mitemo Iyo Barcelona Misimboti yakasimbiswa mukati
Iwo Akakosha Metrics eAnalytics yeMukati mekutengesa
China, December 24, 2015 China, December 24, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe makambani makurusa anorwira nekutevera metric. Kwemakore anodarika gumi ndati analytics inowanzo gadzira mibvunzo yakawanda kupfuura yainoita mhinduro sevashandisi vari kupatsanura, kusefa, uye kuongorora traffic. Sanganisa icho pamwe nenyaya yekuti inopfuura hafu yeako ese analytics traffic inogona kugadzirwa nemabhoti, uye wakasara uchikwenya musoro wako nguva zhinji. Mojo Media Labs yakaburitsa iyi infographic, Iyo Inbound Marketer's Gwaro reData
Kuuya kwedata hombe kwakaunza nhaurwa zhinji dzakasiyana maererano nema analytics, kuteedzera uye kuyerwa kushambadzira. Sevashambadziri, isu tinonyatso kuziva kukosha kwekutevera kwedu kuedza, asi isu tinogona kukurirwa nezvatinofanirwa kunge tichiteedzera uye zvatisiri; chii, pakupera kwezuva, chatinofanira kunge tichishandisa nguva yedu pazviri? Kunyange paine mazana chaiwo emametric atinogona kunge takatarisa, ini pachinzvimbo ndinokukurudzira